Twitter dia mety mieritreritra safidy iray hanovana bitsika | Vaovao IPhone
Ao anatin'ny dingana lalina amin'ny fanovana ny Twitter. Hatramin'ny niverenan'ny mpanorina azy voalohany hitantana ny tambajotra sosialy dia mazava fa tsy maintsy manao zavatra izy ireo raha te hanohy hanampy mpampiasa izy ireo ary hitazona ny fahatokisan'ny orinasa azy ireo. Betsaka ny zava-baovao izay toa mikasa ny hanao ekipa isan-karazany amin'ny sehatra, na dia vitsy aza no ho hitantsika hampiharina amin'ny fomba voafaritra.
Taorian'ny fanovana ny isan'ny toetra amam-panahy, izay nampiatoana ny tahiry haino aman-jery, ny valim-panadihadiana, ary ny fitanisana ny fikajiana ny fetran'ny tarehin-tsoratra 140, ny zavatra manaraka ho avy dia ny fahaizana manitsy bitsika efa navoaka. Ny marina dia tsy matetika isika no manoratra, amin'ny ankapobeny, ny bitsika misy hadisoana amin'ny tsipelina na hevitra manjavozavo izay tiantsika ovaina aorian'ny famoahana azy ireo, zavatra iray izay tsy azo atao raha tsy amin'ny famafana ilay bitsika sy fanoratana indray.
Ny fahafahan'ny fanovana ny atiny navoaka dia tsy hamonjy fotoana fotsiny, fa hanolotra traikefa tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa azy ihany koa. Ity dia iray amin'ireo safidy izay notadiavina ela indrindra, ary toa izany Azon'ny tambajotra sosialy atao ihany ny mandray izany ary jereo fa tanteraka izany eo amin'ny efijery amin'ny solosaintsika sy ny telefaona kelikely.
Ny tale jeneralin'ny orinasa mihitsy, Jack Dorsey, dia naneho hevitra tao amin'ny tambajotra sosialy momba ity mety horesahintsika ity. Ankoatr'izay dia nanazava adihevitra iray izay nanamarihana azy raha toa ka ho an'ny mpampiasa voamarina ihany no tokony hanaovana io asa io na tsia.
@howardlindzon tsy azonao antoka hoe maninona ianao no mitanisa an'ity bitsika ity fa eny, ilaina ny endrika fanovana. Fa ho an'ny rehetra, tsy ireo marika famantarana fotsiny ihany
- Jack (@jack) Desambra 29, 2016
Mila fomba iray hanovana [ireo bitsika] ianao. Fa ho an'ny rehetra, tsy ireo izay manana mombamomba voamarina ihany.
Tsy maintsy ho hitantsika ny fivoaran'ny fisehoan-javatra mety io, ary koa ny sisa amin'ny fanatsarana izay mety hivoaran'ny Twitter mandritra ny taona manaraka, toy ny rafitra fitaterana tsara kokoa manohitra ny fanararaotana na fitaovana hanatsarana ny fifandraisan'ny karoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Jack Dorsey, tale jeneralin'ny Twitter: "Mila mahay manitsy bitsika ianao"